Ny masoivohon'ny fiarovam-piaramanidina eropeana dia manamarina ny Moscow Cargo LLC
Home » Vaovaon'ny seranam-piaramanidina » Ny masoivohon'ny fiarovam-piaramanidina eropeana dia manamarina ny Moscow Cargo LLC
Moscow Cargo LLC dia terminal fiaramanidina enta-maoderina maoderina ary mpandraharaha lehibe fikirakirana ny seranam-piaramanidina Iraisampirenena Sheremetyevo, izay manompo 68% ny entana amin'ny seranam-piaramanidina sy ny paositra.
Moscow Cargo LLC dia namoaka fanamarinana RA3 avy amin'ny German National Aviation Administration
Ny fanamarinana RA3 dia manamafy fa ny terminal an'ny Moscow Cargo LLC dia manaraka tanteraka ny fepetra fiarovana ny sidina EU
Ny laharan'ny fisoratana anarana ao amin'ny Moscow Cargo dia RU / RA3 / 00005-01
Ny Moscow Cargo LLC dia navoakan'ny National National Aviation Administration (Luftfahrt-Bundesamt), izay manamarina sy manamarina ireo seranam-piaramanidina sy seranam-piaramanidina ho an'ny maso ivoho an'ny Eoropeana Aviation Security Agency (EASA).
Ny taratasy RA3 (Regulated Agent Third Country) dia manamafy fa ny terminal an'ny Moscow Cargo LLC dia manara-dalàna tanteraka amin'ny fepetra rehetra momba ny fiarovana ny fiaramanidina napetraky ny Vondrona eropeana ho an'ny entana sy mailaka alefa na hamakivaky ireo firenena eropeana avy amin'ny faritry ny firenena tsy EU ( Fitsipika fampiharana (EU) 2015/1998).
Ny laharan'ny fisoratana anarana ao amin'ny Moscow Cargo dia RU / RA3 / 00005-01.
Ny mpanadihady Luftfahrt-Bundesamt dia nandinika manokana ny fampiharana ny programa fiarovana nataon'i Moscow Cargo izay misy ny fepetra hiarovana ny entana ary hitandrovana ny tsy fivadihana mandritra ny tsingerin'ny logistika iray manontolo alohan'ny hamindrana ny seranam-piaramanidina. Ny hetsika fikirakirana entana rehetra manomboka amin'ny fotoana fanekena ny fitaterana mandra-pahatongan'ny fotoana fitaterana an-tsambo dia atao ao amin'ny faritra voafehin'ny seranam-piaramanidina (KZA), izay voarara ny fidirana tsy ara-dalàna amin'ireo entana mandritra ny fikirakirana ny tany.
Moscow Cargo no mpandraharaha entana lehibe indrindra ao amin'ny Federasiona Rosiana manana mari-pankasitrahana RA3. Ny taratasy fanamarinana ankehitriny dia manan-kery hatramin'ny 29 desambra 2023, ary mamela ny sidina mpiaramiasa vaovao an'ny Seranam-piaramanidina Sheremetyevo hananana fanamarinana tsotsotra ary hahazo ny satan'ny ACC3 (Air Cargo na Mail Carriers miasa ao amin'ny Union avy amin'ny seranam-piaramanidina fahatelo), izay takiana amin'ny fandefasana entana sy ny mailaka any amin'ny firenena eropeana.
Ny Regime Agent Registered (miaraka amin'ny Regime Consignor fantatra) dia natolotry ny International Civil Aviation Organisation (ICAO) sy ireo firenena mpikambana ao aminy mba hanohana ny fampiharana ny hevitra Air Cargo Secured Supply Chain (ICAO).
Ny fotokevitra dia novolavolaina taorian'ny nahitana zavatra poapoaka tao anaty fonosana roa nalefa tany Etazonia avy any Yemen tamin'ny alàlan'ny serivisy serasera UPS sy FedEx tamin'ny 29 Oktobra 2010, ary vetivety dia nihanaka be ilay fomba fanao. Hatramin'ny 1 Jolay 2014, ny Vondron Eropeana dia nitaky ny fitaterana an'habakabaka ny entam-barotra sy ny mailaka natao ho an'ny na fitsangatsanganana amin'ireo firenena eropeana avy any amin'ireo firenena ivelan'ny EU dia ataon'ny mpitatitra manamafy ny toerana misy ny ACC3. Izany dia mifanaraka amin'ny lamina ankatoavin'ny EU hanamafisana ny rojom-panaterana azo antoka avy amin'ny firenena fahatelo (Rindrambaiko azo antoka azo antoka azo antoka eran'ny firenena EU).